कुन अमेजन बिक्रीको उपकरणले तपाईंको जीवनलाई सजिलो पार्न सक्छ?
यदि तपाईं अमेजनमा उत्पादन बेच्ने अनुभवको अनुभव गर्नुहुन्छ भने, तपाइँलाई थाहा छ कि यो एक समय-उपभोग प्रक्रिया हो जसले महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू र निरन्तर सुधारको आवश्यक छ।. तपाईं आफ्नो व्यापारिक पक्षहरू आफैले व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्न, मुख्यतया यदि तपाइँ अमेजन अतिरिक्त विक्रय स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ. सौभाग्य देखि, तपाईं आफ्नो जीवन सजिलो बनाउन धेरै पेशेवर अमेजन बिक्री उपकरण पाउन सक्नुहुन्छ. उनीहरूको प्रयोग गरेर, तपाईं आफ्नो व्यवसाय विकासको लागि थप समय समर्पित गर्न सक्नुहुनेछ र अमेजन व्यापार मेट्रिक्स को निगरानी गर्ने प्रक्रियालाई छिटो पार्नुहोस् - private motor yacht charter.
यस छोटो पोष्टले अमेजन बिक्री उपकरणहरू प्रयोग गरेर कसरी आफ्नो व्यवसाय सुधार गर्न सक्छ भन्ने तरिकामा समर्पित छ. त्यसोभए, हामीलाई यी उपकरणहरूमा नजिकको नदेखौं. यहाँ म तिनीहरूलाई अप्ठ्यारोमा बाँड्छु, आवश्यक क्रमको क्रममा म तिनीहरूलाई सिफारिस गर्दछु.
अमेजन व्यापारिक सेवा
जंगल स्कोउट एक स्वचालित अनलाइन सफ्टवेयर हो जुन तपाईंलाई फाइदा लिन सक्नुहुनेछ तपाईंलाई खोज्न मद्दत गर्दछ बाट. यो अनुकूलन अभियानको प्रारम्भिक चरणमा यो उपकरण प्रयोग गर्न उचित छ किनभने यसले अनुमान कार्यमा समय घटाउन र सुरुवात गर्ने सबै खतराहरू हटाउन सक्छ।.
तपाई जङ्गल स्कोउट एप कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने दुई विकल्प छन्. पहिलो एक वेब अनुप्रयोग हो. यसले तपाईंलाई सम्पूर्ण अमेजन सूचीमा आकर्षक बजार नगरी र लाभकारी उत्पादनहरू फेला पार्न सक्षम बनाउँछ. जंगल स्कोउट एपले तपाईलाई सबैभन्दा उपयुक्त सूची पत्ता लगाउन मूल्य, बिक्री, र कोटिले सबै डाटाबेस फिल्टर गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ. यसबाहेक, यो उपकरण प्रयोग गरी, तपाईं प्रतियोगीको पद पद र मूल्य निर्धारण गर्न ट्रयाक गर्न सक्नुहुनेछ. क्रोम एक्सटेन्शनको रूपमा यो उपकरण प्रयोग गर्दै, तपाईंले ब्राउज गर्दा कुनै पृष्ठमा तत्काल उत्पादन जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ. यसले तपाईंलाई सटीक उत्पादनको तुलनाको लागि प्रत्येक उत्पादनको मूल्य, स्थान स्थिति, समीक्षा गणना र अधिक प्रदान गर्दछ.
एएमजे ट्रयाकर अमेजन व्यापारीहरु को लागि एक मूल्यवान मुक्त उत्पादन अनुसन्धान उपकरण हो।. यसले पदोन्नति, रूपान्तरण दर अनुकूलन र प्रतिस्पर्धी विश्लेषणको साथ रैंकिंग बढाउन मद्दत गर्दछ.
तथापि, यस सफ्टवेयरको प्राथमिक लाभले तपाइँलाई व्यावसायिक खोजशब्द अनुसन्धान प्रदान गर्न सक्छ. कम्पनी वेबसाइट डेटाको अनुसार, एएमजे ट्र्याककर पहिले नै अमेजन खोजशब्द ट्रयाकरको उत्पादन गरिएको थियो. यसको मतलब योसँग अमेजन खोज सर्तहरूको ठूलो डेटाबेस छ र तपाईंको अनुकूलन आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्दछ. यस उपकरणको प्रयोग गरेर, तपाईं Amazon खोज परिणाममा तपाईको उत्पादनको आधारमा कसरी कीवर्डसँग सम्बन्धित देख्न सक्नुहुन्छ.
एएमजे ट्रयाक रक्षात्मक रणनीतिको अनुसार, तपाईंले प्रत्येक ग्राहकलाई 5-भन्दा बढि तारा समीक्षाहरू छोड्नु भएको बेलामा नकारात्मक समीक्षा अलर्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।. यसले तपाईंलाई तिनीहरूको समस्या समाधान गर्न तत्काल प्रतिक्रिया दिन र मूल्याङ्कन बढाउन सोध्ने मौका दिन्छ. अर्को उपयोगी AMZ ट्रयाकर सेवा सतर्कता अलर्ट गरिएको छ. यो सेवा अलर्टहरू प्रदान गर्दछ जब कुनै पनि समय अन्य विक्रेताहरूले तपाइँको सूचीबद्ध अपहरण गर्न प्रयास गर्दछ. तपाईं आफ्नो उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण डेटा संकलन गर्नु अघि तिनीहरूलाई पुन: घोषणा गर्न सक्नुहुनेछ.
त्यसैले, यो उपकरण केवल रैंक ट्रयाकर भन्दा बढि छ किनकि यसले तपाईंलाई जानकारी दिन्छ कि तपाईंको उत्पादन सूची अनुकूलन गर्न, तपाईंको उत्पादनको स्तर सुधार गर्न र कसरी अमेजन किन्क्समा बक्समा देखा पर्दछ।.